တူရကီဖလား Galatasaray မှဖြစ်စေ Alanyaspor နည်းပြ Erol Bulut သည်ဆရာဝန်အား Fatih Terim ၏ဆရာအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်လိဂ် ၄-၁ ဖြင့်ဖလားပြိုင်ပွဲတွင်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော၎င်းတို့၏အိပ်မက်များကိုဖျက်ဆီးပစ်သည့်အချိန်ကိုသတိရသည်။
ပြိုင်ပွဲမစမီ Erol Bulut က “ငါမရှိဘူး၊ ငါတို့ရှိနေတယ်” ဟူသောဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူကအဝါရောင်နှင့်အပြာရောင်အသိုင်းအဝိုင်းကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးသောစကားများလည်းပြောခဲ့သည်။ Erol Bulut “အခုအချိန်မှာပုံစံအခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့ကတစ်ဆင့်တက်သွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့်ဒါဘီရဲ့အခြေအနေကကွဲပြားခြားနားတယ်။ ဒီကစားသမားတွေကဒီပွဲစဉ်တွေကြောင့်လှုံ့ဆော်ခံရတယ်။ ဒီအကြောင်းကြောင့်ရလဒ်ကောင်းတွေထွက်လာနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲနှစ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအရမ်းအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုသင်ကြားပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ။
RESTBET501 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER BETBOO868 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER RESTBET501 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER RESTBET501 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER SUPERTOTOBET0120 FENERBAHÇE’DE SERDAR AZİZ ŞOKU! BETBOO618 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR BETBOO868 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR BETBABA138 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR SULTANBET516 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR RESTBET501 FENERBAHÇE’DE SERDAR AZİZ ŞOKU!
13 Comments on SUPERTOTOBET0120 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER
ASLIHAN November 29, 2020 at 1:10 pm
ÇAĞRI November 29, 2020 at 9:50 pm
MUKADDER November 29, 2020 at 10:50 pm
TUĞBA November 30, 2020 at 9:40 pm
MEHMET December 3, 2020 at 8:20 pm
UFUK December 4, 2020 at 3:30 am
NEVİN December 6, 2020 at 4:40 pm
AHMET GÖKHAN December 6, 2020 at 10:20 pm
MUSTAFA December 7, 2020 at 3:10 am
SEMİH December 7, 2020 at 4:20 pm
CİHAN December 7, 2020 at 4:40 pm
HATİCE ÖZGE December 8, 2020 at 1:50 am
ELİF December 10, 2020 at 2:20 am
restbet kullanıcısına çok kazandıran hızlı site ile sizde kazanacaksınız.